उपत्यकामा थप १८२ कोरोना पुष्टि कुन ठाउँमा कति ? – Eshankharapur
२४ वर्षकी महिला आफ्ना २ छोरी समेत लिएर ५० बर्षे पातकी बुढो वेप`त्ता (हेर्नुहोस भिडियो)
मुख्य पृष्ठ /Corona (COVID-19) Updates/उपत्यकामा थप १८२ कोरोना पुष्टि कुन ठाउँमा कति ?
काठमाडौं । शुक्रबार उपत्यकामा १८२ सहित देशभर जना कोरोनाका संक्र`मित थपि`एका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले नियमित पत्रकार सम्मेलनमार्फत कोरोनाका संक्र`मित थपिएको जानकारी दिए।
प्रवक्ता डा. गौतमका अनुसार काठमाडौं जिल्लामा १४२ जना, भक्तपुरमा १५ जना र ललितपुरमा २५ जना गरी काठमाडौं उपत्यकामा थप १८२ जनामा कोरोना संक्र`मण पु`ष्टि भएको हो। नेपालभर कोरोनाबाट संक्र`मित हुनेको सं`ख्या २० हजार ४८३ पुगेको छ।
हालसम्म १८ हजार २१४ जना डिस्चा`र्ज भएका छन् भने गत २४ घण्टामा २५० जना डिस्चार्ज भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। नेपालमा हालसम्म सक्रिय संक्र`मितको संख्या १२ हजार १३२ रहेको छ।
मन्त्रालयका अनुसार गत २४ घण्टामा थप ११ जनाको मृ`त्यु भएको छ भने मृ`त्यु हुनेको संख्या १ सय ३७ पुगेको छ। गत २४ घण्टामा १३ हजार ५७९ जनाको पी`सी`आर विधि बाट कोरोनाको परी`क्षण गरिएको पनि मन्त्रा`लयले जनाएको छ। यस्तै १२ हजार २३४ जना क्वारे`न्टिनमा रहेका छन्।
कोरोना भाइरस वि,रुद्धको भ्याक्सिन परीक्षणको अन्तिम चरणमा, जुलाइमा आउन सक्छ खुसीको खबर !!
जीवन रक्षाका लागि लकडाउन वैशाख २२ गतेसम्म लम्ब्याउने सरकारको तयारी !